Sidee loo hagaajiyaa dhimashada lama filaanka ah ee Samsung Galaxy S3 | Androidsis
Francisco Ruiz | | Samsung, Khiyaamada Android, Tababarada
Dhibaatada loogu talagalay dami dusha sare ee shaashadda Samsung waxba ma aha marka la barbardhigo dhimashada lama filaanka ah ee saamayn ku leh teendhooyinka Samsung Galaxy S3, moodal GT-I9300 horeyba taxane gaar ah oo ku saabsan xusuusta xusuusta ExynosHaddii aad rabto inaad ogaato inaad ka mid tahay kuwa ay saameeyeen dhibaatadan aadka u daran ee qalabka iyo xallinteeda, hubi inaad akhriso maqaalkan oo aan isku dayeyno inaan ku caddeyno dhammaan shakigaaga.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaanno inuu deggan yahay, waa in haddii aad u cusbooneysiiso nooca ugu dambeeya ee la heli karo, Android 4.1.2, waa inaadan ka baqin in terminal-kaaga uu dami doono oo uusan dib u soo laaban doonin, maadaama sida ay sheegeen Samsung, cusboonaysiintaan dhibaatooyinka geeri kedis ah taas oo illaa iyo hadda ay tahay astaanta shirkadda Kuuriya.
Isticmaalayaasha aan wali kor u qaadin jelly Bean kuna sii soco Ice Cream Sandwich o Android 4.0, hoosta waxaan ku sharaxeynaa sida loo ogaado haddii aad ka mid tahay kuwa ay saameysey sidaas darteedna waxaad halis ugu jirtaa inaad la kulanto guuldaradii nasiib darrada ahayd ee dhimashada lama filaanka ah ee kor ku xusan ee Samsung Galaxy S3.
1 Sida loo aqoonsado in jabku ka mid yahay kuwa ay dhibaatadu saameysey
2 Samsung Galaxy S3 Xalka dhimashada degdega ah
Sida loo aqoonsado in jabku ka mid yahay kuwa ay dhibaatadu saameysey
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u ogaanno haddii jabkeennu ka mid yahay kuwa ay saameeyeen dhibaatada geeri kedis ah, waxay kala soo bixi doontaa Samsung USB Wadayaasha iyo keydka arjiga ee Android, (Dukaanka ciyaarta), barnaamijka bilaashka ah eMMC Brickbug.
Marka la soo dejiyo oo la rakibo, waanu fulin doonaa oo, sida shaashada soo socota, waxay ku tusi doontaa si cad oo fudud, haddii aan gacanta ku hayno terminaal chip saameyn ku yeeshay.
Sida aan ka arki karno shaashadda kore, culeyska laga hadlayo wuxuu ka mid noqonayaa kuwa ay dhibaatadu saameysey.
Samsung Galaxy S3 Xalka dhimashada degdega ah
Xalku waa mid aad u fudud, cusbooneysii sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee ah qalabeynta, ama loo maro OTA ama dhex mara Kies.
Waxa kale oo jira xalal kale oo beddel ah, in kasta oo kuwani ay haddaba u noqon lahaayeen kuwa adeegsada khibrad dheeraad ah, maaddaama ay ku lug yeelan lahayd biligleynaya a Jiirka wax laga beddelay oo loo maro Odin. Xalkan ugu dambeeya, marka lagu daro xalinta dhibaatada waxaan sidoo kale xidid u noqon doonnaa terminal-ka oo aan rakibi doonaa a soo kabashada caadada ah kaas oo aan ka iftiimin karno roomaatada la kariyey.
Taladayda ugu badan ee isticmaaleyaashu waa inaad ku dhex sameyso OTA ama ku guuldareysto taas by Kies, Maaddaama hawsha biligleyntu, in kasta oo ay wax iska fudud tahay, waxay halis ugu jirtaa in aad wax khalad ah samayso aad xamuul ku dhejin doontid lagana tagi doono adigoon daboolin dammaanadda rasmiga ah.
Soo dejiso - eMMC Brickbug
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S3, sida loo xaliyo dhibaatada dhimashada lama filaanka ah
199 faallooyin, ka tag taada
4.1.2 oo waxay ii sheegaysaa waxa qatar ah oo khatar ah ... codsigan ma yahay mid la isku halleyn karo?
Jawaab David Alonso
Aamusnaan inay ogaato in jabku khatar yahay laakiin haddii aad cusboonaysiisay Android 4.1.2 wax cabsi ah kama qabtid.
Markay ahayd 08/02/2013 16:57 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Aad baad ugu mahadsantahay kalsoonida aad i siisay, waxaan galiyay nooca cusub laakiin halista ayaan ku celcelinayaa, laakiin waxaad ii sheegtay waxaan dareemayaa nafis mahadsanid sxb
Gabi ahaanba waa been, waxaan haystaa 4.1.2 waxaanan la kulmay shilal joogto ah usbuuc usbuucii ugu horeeyay oo goosgoos ah iminkana saacad kasta.
Ku jawaab afizionau
Jose Sola dijo
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhacaya saacad kasta, wuu xirmay, ma garanayo waxa aan ku sameeyo.
Ku jawaab jose Sola
Victor Alberto Santana Delgadi dijo
aniga oo kale ah !! Ma jiraa qof yaqaan sida loo saxo?
Jawaab Victor Alberto Santana Delgadi
Subax wanaagsan, su'aal waxaan haystay galkayga s3 ee qorshaha telcel waxaanan ka badalay shirkad ilaa movistar waxay ii sheegtaa inaan cusbooneysiiyo markasta oo aan dhaho hadii ay ii sheegto inay khalad jirto oo aanan cusbooneysiin hadana si lama filaan ah mar dambe uma daarto Sidee ayaan uga dhigi karaa inay mar kale bilawdo Thanks?
Ku jawaab hiram
Waad salaaman tahay, ma ogtahay inay ugu dambayntii sidan oo kale igu dhacday ...
Jawaab ku sii agostina
Waa salaaman tahay, dhibaatadaydu waxay tahay Samsung-kayga ma sii shito mar dambe, maxaan sameyn karaa si aan u shido marka hore ka dibna aan u sameeyo talaabooyinka aad ku talinayso, mahadsanid.
Isla waxbaa igu dhacay, waxaan dhigay noocii ugu dambeeyay, waan hubiyay walina wuxuu leeyahay jab iyo khatar
Si kasta oo ay u cusbooneysiiyaan terminaalka, way sii socon doontaa in loo tixgeliyo khatar maadaama emmcdu ay isku mid tahay.
Cusboonaysiinta ayaa ah balastar la iskudayo in laga fogaado geeri lama filaan ah, taas oo si aan qofna been loogu sheegin aysan u gaarin 100 x 100.
Markay ahayd 12/04/2013 00:29 PM, «Disqus» ayaa qoray:
ma ku dhejin kartaa iskuxirka firida wax laga badalay? Mahadsanid
Ku jawaab Android
Waa inaan sameeyaa cashar sharaxaya nidaamka.
Feejignow in sida ugu dhakhsaha badan ee aan diyaariyo aan u soo dhejiyo.
Markay ahayd 08/02/2013 17:08 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Horey waan u dhintey ... hada macquul maahan, sax?
U gee SAT kaas oo ku daboolan damaanad.
Markay ahayd 09/02/2013 17:34 PM, «Disqus» ayaa qoray:
julvic salcedo dijo
Waa salaaman tahay galab wanaagsan, wax yar ayaan ku qabaa S3-kayga, iftiinka laydhku wuxuu ahaa mid buluug ah shaashaduna marna ma daarneyn, batteriga waan ka saaray si aan u arko bal in unuggu sudhan yahay ka dibna waxaan u imid inaan daarno mana soo leexan ku saabsan ama wax kasta. Maxay taasi noqon kartaa oo ka xumahay haddii aad ka jawaabi karto emaylkayga?
Jawaab julvic salcedo
Saaxiib waxaan hayaa samsung i8190l oo leh geeri lama filaan ah waxba ma qaban karo maxaa yeelay ma daarto, hadaad fadlan talo iga siiso, mahadsanid.
oo haddii la isku dayayo in la cusboonaysiiyo ay dhimato mise dhibaatadaas maysan jirin ??
Ku jawaab jaime rendon
Markasta oo ay sharci tahay, dammaanaddu waa inay dabooshaa.
Markay ahayd 10/02/2013 17:05 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Subax wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego wax igu dhacaya hadda oo aan cusbooneysiiyay S3, taasina waa taas in kasta oo aan wax walba cusbooneysiiyay illaa kan ugu dambeeya, iyo batteriga (65% iyo mararka qaarkood wax yar ka yar), aniga HORTA AYAAD SOO XIRTAY SADDEX FURSADO! IYO WAX WALBA OO AAN TIRIN TO. Wax sidan oo kale ah weligay iguma dhicin. Su'aashayda: qof ma i caawin karaa fadlan?
Ku jawaab fºjaviergm
Waxaan isku dayi doonaa inaan helo macluumaad ku saabsan dhibaatadaada haddii aan xal helno
Markay ahayd 20/02/2013 09:56 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waxay u dhacdaa si isku mid ah; Waxaan haystay Jelly Bean 4.1.2 bil iyo usbuuc ka hor moobilkeygu wuxuu bilaabay inuu xirnaado illaa saddex jeer maalintii a Ma jiraa qof iga caawin kara fadlan?
Hagaag, ma aqaano inay wax cusub ka noqoneyso Jelly Bean 4.1.2, dhowr maalmood ka hor ayaan cusbooneysiiyay haddana mobile-kayga ayaa si isdabajoog ah u laalaada iyo / ama dib ayuu isu bilaabaa.
Caawina fadlan, waan halaagnay: - ((((
Ku jawaab Charo
Waxyaabaha saxda ah ee igu dhaca aniga ayaa leh S3 (4.1.2 Jelly Bean). Maalin walba si joogto ah ayuu u laalaadaa, mararka qaarkoodna wuu iskiis u soo kacaa, marar kalena wuu xidhaa. Ma jiraa qof horeyba u heystay xal?
Jawaab Raul Alberto Gamboa Flores
Noocii hore, wax walboo sifiican ayey u socdeen ... batteriga waqti dheer ayuu raagey ... ma damin markii uu dareemo siduu ahaa !! .... dhibaatooyinkan cusbooneysiinta iyo dhibaatooyin badan ... oo aan xal loo helin! Hada batteriga markaan uga tago anigoo habeyn charge subaxdii…. YAAB! Kaliya waa 35%.
Shaygu aad buu u kala go'ay !!
!! XALKA ayaan rabnaa YAAAA !!
sidoo kale aniga, mar kasta oo ay sii laalaado marar badan, ma garanayo waxaan sameeyo
Ku jawaab diegodevs
Javier Lalin dijo
Wax la mid ah ayaa igu dhacaya aniga sidoo kale tan iyo markii aan u cusbooneysiiyay s3 ilaa jelly bean 4.1.2 ... reboots, way xirtaa, barafowdaa ... iyadoo 4.1.1 ay ahayd mid qumman !! dadka
Jawaab Javier Lalín
Habeen wanaagsan waxaan haystaa galaxi Mareykan ah 4 waxaanan naqshadeeyay inay tahay inaan soo dejiyo flax meesha aan ka qaadan karo
Ku jawaab ricardo
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay, waxaan haystaa beta-ka 4.1.2, oo ah i9300xxelk4, in kasta oo ay calaamad ii tahay inaan qatar ku jiro
Haddii aad ku jirto Jelly Bean waxaad horayba uga baxday halista, dalabku wuxuu ogaadaa oo keliya moodeelka iyo nambarka taxanaha ah ee gunta. taasi waa sababta ay digniinta kuu siinayso.
Waad ku mahadsantahay jawaabahaaga, runtu waxay tahay inaan ku faraxsanahay markaan arkay golaha aad hubinaysid oo aad si joogto ah u cusbooneysiinayso, hambalyo iyo mahadsanid
Cristian Munoz dijo
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaan ku qabaa SGS3-kayga, qalabku wuu qaboobayaa waana inaan dib u bilaabaa anigoo riixaya badhanka korontada muddo dheer.
Haddii qof ogyahay sida aan ku ogaan karo waxa dhacaya ama sida loo xalliyo dhibaatadan, waan ku qanacsanahay.
Jawaab ku sii Cristian Muñoz
Waxa ugu fiican ayaa noqon lahaa in loo qaato SAT
Isla waxbaa igu dhaca aniga ... bil ka hor waxaan cusbooneysiiyay S3-kayga nooca 4.1.2, toddobaadkiina ilaa hada wuu barafoobaa mararka qaarna dib buu isu cusbooneysiiyaa ... wixii aan ka aqristo fagaarayaasha kaladuwanna waxay ku dhacdaa dad badan oo isticmaala. ... Waxaan uga mahadcelin lahaa Samsung sharaxaada iyo xalka !!!!
Waad salaaman tahay, ogow inaan haysto 4.1.2 laakiin nooca Xusuusin 2 waxaan qiyaasayaa inaan ku dhejin doono nooca asalka ah.?
Ku soo jawaab Marelyn
Ii oggolaan maayo inaan suuqa furo
Waxaan ku rakibay 4.1.2 haddana ma furi karo dukaanka ciyaarta
Gali Soo-kabashada oo samee kaydinta masax, ama haddii aadan galin menu / goobaha / codsiyada oo tirtir xogta iyo keydka dukaanka Play ama Suuqa.
facade 1311 dijo
Waxaan cusbooneysiiyay samsung-kaaga android 4.1.1 jelly bean ... waan ku sii wadaa taas ama waxaan sii wadaa inaan u cusbooneysiiyo 4.1.2 ... Ma aqaano waxa loo yaqaan 'asr' sababtoo ah mowduuca cusub ee halkaas ku jira noocaas
sxb waxaan ku cusbooneysiiyay odin ilaa 4.2.1 laakiin waxay leedahay cilado badan oo ay ka mid yihiin barnaamijyada fariimaha oo aan sii fureyn markasta oo aan furo codsi waxaan helayaa tts way iga joojisay su'aashaydii waxaan dib ugu noqon karaa 4.1.2 iyo sidee ku mahadsantahay
Waa salaaman tahay waxaan iibsaday s3 waxayna la timid jelly bean4.1.1 iyo sumad qatar ah oo tngo q casriyaynaysa ilaa 4.1.2
Ka jawaab joojinta
Dabcan waa inaad cusbooneysiisaa saaxiib.
hello, ma aqrisay qoraalkayga?
Ku jawaab adil
Waad salaaman tihiin maxaa cusbooneysiin u ah Mexico ee digirta jelly tan iyo markii aan arkay dhowr XELLA XELLB XELLC oo ah tan ugu kalsoonida badan waxayna 100% hubaal tahay in markaan cusbooneysiiyo sgs3keyga uusan ku imaan doonin geeri lama filaan ah.
Waxaan hayaa cusbooneysiinta 4.1.2 Weli khatar baan ku jiraa ?????
Ku jawaab mariio
Aragti ahaan maahan sidaas darteed waxaad noqon kartaa saaxiibtiis gebi ahaanba deggan
Aad baad u mahadsan tahay, waan ka xasilloon ahay, hal shaki oo kaliya ayaan ka qabaa xxella, ma haysto noocaas laakiin waxaan cusbooneysiiyaa hal saac waxaanan ku haystaa 4.1.2 xitaa marka waa inaan shidaa ama waan joogayaa si aan u seegin waan hayaa sidoo kale shirkadu waxay isiisay taleefoonno
Naso oo hubso inaadan mar dambe wax kale qaban doonin
Waan ka xumahay inaan mar kale ku dhibaateeyo, laakiin hadda dukaanka ciyaarta ma furi doono mar dambe. Waan ku faraxsanahay caawintaada
Waxaan iibsaday 4 bilood ka hor Samsung galaxy s3 moodeelka moobiilka ee GT-I9300 wuxuuna bilaabay inuu soo laallaado maalmo ka hor laakiin maanta waa dhimatay. Waxaan haystaa dammaanad laakiin maahan qaansheegta iibka waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan u qaadan karo SAT biil la'aan. Mahadsanid.
Ku jawaab Ariadna Ramírez Rizo
Iskuday, inkasta oo aad sifiican u weydiisan lahayd nuqul qaansheegta dukaanka aad ku iibsatay.
By the way, noocee ah nooca Android ayaad ku jirtay?
Markay ahayd Maarso 8, 2013 20:17 PM, Disqus wuxuu qoray:
Mahadsanid. Waxyaabaha xun ayaa ah inaan cusbooneysiiyay 4.2.1 taleefankuna marba marka ka dambeysa wuu sii dhacayaa waana inaan dib u bilaabaa ...
Jawaab Jaime Plaza
Gali qaabka soo kabashada oo samee kaydinta masax, taas waa inaad xallisaa dhibaatada.
ok, waxaan eegi doonaa si aan u arko sida loo sameeyay. Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada.
Jose kaligiis dijo
Francisco sideen ugu dhejiyaa qaabka soo kabashada maxaa yeelay nus saac kasta ayay igu dul sudhan tahay
Jawaab jose sola
Gabi ahaanba waa been in ay jirto xal loogu talagalay dhimashada lama filaanka ah. Waxaa jira 'balastar' laakiin waxa kaliya ee aad heshaa waa inaad sii dheereysato cimriga (qatarta ah inaad dhaafto waqtiga damaanada). My S3 wuxuu lahaa halista geerida lama filaanka ah (taariikhdeeda wax soo saar) iyo inti aan isku dayay inaan iska ilaaliyo, waxay la dhimatay 4.1.2, iyadoo leh laydh dhalaalaya oo la kariyey iyo waxyaabo kale si looga fogaado geeri deg deg ah.
Caqli gal ayaa i cadeynaya inaan sax yahay, waa cillad HARDWARE ah oo ku jirta S3yada qaar (cillad run ah), ma ahan cillad SOFTWARE ah, iyadoo aan loo eegin sida ay u cusbooneysiinayaan S3 hadana sida iska cad weligood ma saxi doonaan cilladda HARDWARE (in kasta oo ay dib u dhigaan geerida lama filaanka ah). Marinka loo maro SAT waa lama huraan.
Kafiican naftaada ubogow kahor intaadan hadlin ... Maanta dadku mar dambe uma huraan inay hadlaan oo ay ra'yigooda ka dhiibtaan kaliya kubbada cagta iyo daawada, maya, wali waxay helayaan inay ka faaloodaan barnaamijyada, softiweerka, qalabka iyagoo aan wax fikrad ah haysan.
Ha u qaadan si aad u xun, laakiin dhibaatadu waxay tahay, barnaamijka softiweerka ah, qalab adag inuu noqdo mid sax ah, dhibaatadu waa qalabka qalabka xusuusta gudaha, waxaan badalayaa qalabkaas (oo khatar ah) ama waxaa lagu dhajinayaa firida , soo kabashada iyo bootloader.
Haddii mobilkaagu kaa horjoogsado inaad qabato qalliinka 1 + 1 = 2, waad u barnaamijaysaa si aad uga fogaato, maahan.
Haye, waxaan wax ka qorayaa Uruguay, wuxuu igu sii gudbiyay aniga, taleefankayga gacanta ayaan ka qaadayay iyo
Waxaan idhi ku fur si aad u isticmaasho wuuna istaagay oo wuu damay, waan qaatay
baytariga iyo waxba oo waxaan idhi galaxy s 3, aakhirki waan iskaga tagay
rarka habeenkii oo dhan iyo wax kastoo ay tahay, maalintii xigtay waxaan bilaabay rabitaan
daar oo waxba, markii aan ka furay baalaha isagaa iska shiday
ka faa'iideyso fursadda aad ugu geyso halka ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay, HADA LABADA SHAKI:
Ma Ogtahay Haddii Aad Leedahay 4.1.2 Jelly Bean? SHAQA KALENA waa haddii aad horeyba u haysatay
cusbooneysii oo u gudbi mar kale eMMC HAA. QALBIGA KHATARTA HALISTA
Saaxiib ayaa igu leh Maya, cufan amni oo macnaheedu yahay waxaan haystaa taleefan gacmeed cad oo Mareykan ah verizon 16 gb iyo android 4.1.1 oo wuxuu dhahaa Maya, chip aamin ah
Jawaab Jose Martin
Waxay ka dhigan tahay inaad nabad qabto.
Markay ahayd 16/03/2013 22:31 PM, «Disqus» ayaa qoray:
sxb francisco madaama aan taleefankayga ku gudbiyay mar hore waa dhimatay oo hada maxaan sameeyaa hadii aysan daarin Waxaan u kaxaystay aqoon isweydaarsi iyo barnaamij ka hadlaya taleefanka oo lagu akhriyayo qaabka loo yaqaan 'donload' oo la dhaho waa nidaam isku dhafan oo kululaanaya oo taleefanka daminaya. Tani waa isla dhimashada lama filaanka ah? Lama sii damaanad qaadi doono waxayna ku jirtay nooca 4.1.1
Jawaab merj alejandro
Waxa kaliya ee aan arko inaad sameyn karto ayaa ah inaad weydiiso SAT qiime ama isku day inaad sheegato Samsung
Waxaan haystaa s3, wali waxba ma dhicin laakiin waan baqayaa, waxaan ku hubiyey arjiga oo waxay leedahay haddii qiiq khatar ku jiro, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab juanca
Carlos Ruben Pagan Rodriguez dijo
Walaal hadaan haysto cusbooneysiinta rasmiga ah ee lafaha jelly bean xxella waxaan suurta gal ah silica dhimashada lama filaanka ah.
Jawaab Carlos Ruben Pagan Rodriguez
Marka la eego faallooyinka isticmaaleyaashii ugu dambeeyay, nasiib-darro waxay u muuqataa in midkoodna boosteejooyinka ay dhibaatadu saameysay aan laga badbaadin karin dhibaatada tan iyo markii ay u muuqato in dhimashooyin lama filaan ah weli la silcayo.
Waxaan ka qoomameynayaa inaan ku wargaliyo in wax ka badan tan laga sii daayay S3 ilaa 4.1.2 geerida lama filaanka ah micno malahan, waa cilad soo saar bishii Maajo Waa inaad sheegataa Samsung oo aad beddeshaa saxanka
Ku jawaab mauricio supertec
Halkeen ka wici karaa damaanad iwm?
Waxay uun ii keeneen samsung galaxi s3 laga bilaabo markaan shido, ma sii jiro wax ka badan 2 daqiiqo oo wuu daminayaa. Tani waa wax caadi ah taleefan jiilkii ugu dambeeyay
La eeg hubiyaha haddii aad leedahay terminaalka halista ugu jira dhimashada lama filaanka ah, iyo haddii aad awooddo, sheegto ganacsadahaaga.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa 5 usbuuc oo s3 ah oo si lama filaan ah ayey u dhimatay, sidee baan sameeyaa, waa inaan bedelaa micro micro oo aan ku bedelaa mid kale
Waa dhibaato ku jirta xusuusta gudaha ama emmc, waa inaad u qaadataa SAT. 05/04/2013 00:38 AM, «Disqus» ayaa qoray:
Macluumaadka gebi ahaanba waa been ... ma jiraan wax xal ah oo loogu talagalay dhimashada lama filaanka ah .. waxa barnaamijka Odin sameeyo ayaa dheereynaya meertada nolosha ee xarunta xitaa haddii lagu cusbooneysiiyo beel jelly sida muuqata aaladda ayaa dhiman karta waqti kasta
Jawaab Samsung marce
Waxaan ka fikirayaa iibsashada taleefankan, dhibaatadan dhimashada lama filaanka ah waxay ku jiri doontaa boosteejooyin cusub ??? Sida oo kale maxay i siin lahaayeen haddaan maanta u tago inaan iibsado? mahadsanid = D
Jawaab Rodrigo Mejía
Waxa ugu fiican ayaa ah inay kuu daayaan inaad isku daydo oo aad rakibato Emmc
ka hubi dukaanka ciyaarta oo shaqsi ahaan u hubi
Markay ahayd 07/04/2013 02:31 PM, «Disqus» ayaa qoray:
ok iyo markii aad soo degsaneysid hubiyaha Emmc, sideen ku ogaan karaa in boosteejada ay ku jirto xaalad aad u wanaagsan? , mahadsanid jawaabta =)
Apple wuxuu hubiyaa xasuusta emmc wuuna cadeeyaa inuu ka yimid taxanaha ay saameysay. 07/04/2013 02:55, «Disqus» ayaa qoray:
Jorge sandoval dijo
KA XADGUDUB WAA MAXAY silsiladaha saameeya taleefanada warkan? TMB WAAN KAFIKIRAYAA INAAN GATAAN
Ku jawaab Jorge sandoval
Salaan !! s3 9305 16gb nooca caalamiga ah wuxuu la xanuunsadaa isla xumaanta ??
Waa salaaman tahay, dhibaatada ayaan ku qabaa Galaxy s3-ga aad sheegayso inuu barafoobayo waana inaan dib u bilaabaa mise isagaa iskii isu soo celiya…. Waxaan hayaa lambar taleefankayga tan iyo xagaagii hore illaa haddana may dhicin! Waxaan rakibay barnaamijka aad sheegatay runtiina waxay umuuqataa inuu khaladku khaldan yahay ... su'aashaydu waxay tahay ... dhowr bilood kahor shaashadda ayaa jabtay waxaanan uqaatay inaan hagaajiyo, qubka aad sheegaysid wuxuu kamid yahay shaashadda shaashadda ama inkasta oo ay iyagu i beddeleen shaashadda in jabku qayb ka yahay qaybo yar oo aan la beddelin ?? Waxaan ku idhaahdaa anigoo tagaya oo sheeganaya meeshii lagu hagaajiyey, ama xagee aadi karaa?
DANIEL MARQUEZ dijo
GALAB GOOB, WAAN HAYSGS3 WUXUU U SHAQAYNAYNAY SI QURUX BADAN SI DEG DEG AH AYANA U XIRTAY OO LAMA WAAYO. WAXAAN QABAY QODOB 4.1.1 WALIGI WAAN cusbooneysiin karaa. XAL KU HELI DOONAA AMA FUDUD OO WAA LAGU DHISAY WALALNIMO.
Jawaab DANIEL MARQUEZ
Haddii aad marin u hesho qaabka soo dejinta waxaad ku tijaabin kartaa Odín, haddii kale waa inaad u qaadataa adeegga farsamada.
Bishii Abriil 11, 2013 19:45 pm, Disqus wuxuu qoray:
Emanuel Couste dijo
Waxaan hayaa nooca android 4.1.2
Saldhiggu wuxuu wax ka sheegayaa I9300 EMC
iskuduwaha sidoo kale halis ayuu ku jiraa?
Soo dejiso arjiga oo waxay dhahdaa jab khatar ah
Jawaab Emanuel Couste
Iga raali noqo, gaalkaygu ma soo dejiyo barnaamijka internetka wuxuu u muuqdaa mid aan sax ahayn oo laga soo dejistay
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa inaan ka faaloodo hal shay
Isha oo si fiican u akhri
Markay ahayd 10-04-2013 waxaan ka iibsaday Samsung Galaxy S3 guriga taleefanka waxaanan qiyaasayaa waxa ku dhacay taleefanka 12-04-2013 DEG DEG SUDDEN. Haddii ay tahay inaad rumaysato waxaan idhaahdo waxaan ku dhejinayaa sawir leh biilka taleefanka.
Hadda waxaan kuu sharxi doonaa wixii dhacay:
1-Waxaan shiday taleefanka marki iigu horaysay waxaana astaan ​​ka muuqataa dhanka midig oo dhahaysa cusbooneysiin sugeysa
2- Waqti ka waqti waqtiga maalinta oo dhan waxaan lumiyay calaamadda kaarka moviestar-ka, waan sugayay wax badana way qaadatay in la beddelo bogga oo laga dhigo mid jiifa oo toosan in ka badan 4 ilbidhiqsi oo cusub oo aan waxba ku rakibnayn.
Waxa ugu muhiimsan ayaa imanaya hadda - rakib barnaamij loogu magac daray LOUNCHER 3D version tijaabo ah. Maalin badhkeed waan fiicanahay, waxaan dib ugulaabanayaa ku ciyaarida astaamaha 'Louncher' waxayna ka muuqataa waxkasta oo khafiif ah oo ganaax ah fariin qalad firmware ah ayaa umuuqatay wax sidaas oo kale ah. Dhammaantiin waad salaaman tihiin berrito waxaan raaci doonaa taleefanka si aan u beddelo ama uga fiicnaado
ii soo celi lacagta.
aniguna waa iga naxaa. Waxaan haystaa 1.4.4 waa inaan cusbooneysiiyaa ama sidaas ayaan uga tagayaa
Camilo Castro dijo
fiid wanaagsan; magaceygu ​​waa camilo castro, waxaan helay samsung galaxy s 3, wuu dansan yahay mana doonayo inuu daarto, kaliya batteriga ayaa ka muuqda shaashadda laakiin lacag kama qaadanayo, waxaan jeclaan lahaa in laga caawiyo samsung si aan u arko bal in qolkeygu yahay go'an oo sii soco si aad u bilowdo hawsha ka hor inta super mi cel uusan aheyn 3114428671 ama 7451222 ext 151
Ku jawaab camilo castro
Oscar Arriaga dijo
Galab wanaagsan, waxaan raadinayey qiimaha Galaxy maxaa yeelay waxaan rabaa inaan iibsado mid laakiin markaan akhriyo wixii ku dhaca dadka kale ee isticmaala Dhimashada degdegga ah waxaan ka baqayaa inaan iibsado oo aan lumiyo lacagtayda 6 bilood, waxaan qorsheynayaa inaan ku dalbado Amazon bisha Sebtembar tan iyo markii aan u safri doono USA taariikhdaas! Miyaad u maleyneysaa inay amaan tahay in la iibsado mise waxay muujin doontaa cillad si isku mid ah? Mahadsanid
Jawaab Oscar Arriaga
Hagaag, kuwa hadda la iibinayo, tusaale ahaan kuwa ka iibiya kuwa Movistar iyada oo loo marayo maalgelintooda, way ka xor yihiin xukunka emmc.
Bishii Abriil 26, 2013 00:50 pm, Disqus wuxuu qoray:
Waad salaaman tahay, ma ogtahay inaan haysto galakeyga s III oo loo cusbooneysiiyay nooca 4,1,2 iyo arjiga (MMc brigbuk) waxaan ku helayaa qatar khatar ah? oo waxa kale ee igu dhegganaa dansanaa ???? salaan
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday mobilka bishii Nofeembar, waxaan haystaa android 4.1.2 waxayna bilaabeysaa inay i siiso dhibaatooyin xagga shaashadda xiran ...
Jawaab Fco. José
iibsashada taleefanka gacanta ee $ 5000 si uusan u shaqeyn ugu yaraan 10 sano waa qof kasta waa khiyaano
Jooji been abuurka Shiinaha, waxaad sifiican u qabataa waxyaabaha shaqeeya haddii aad u socoto
lacag qaali ah
alonso lopez dijo
My galaxy s3 waa qumman yahay, laakiin runtu waxay tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan helo iPhone 4s ama 5, mashiin fiican iyo qalab tayo sare leh, wuuna jiri doonaa ilaa aad caajiso, waxaan u iri maxaa yeelay waxaan haystay 4s
Ku jawaab alonso lopez
Maanta dadku waxay dhinteen s3-gii shalay waxaan dhigay barnaamijkii yaraa wuxuu ii sheegay in qashinkeygu khatar ku jiro maantana uu dhintay… .. wuxuu kusii nagaanayaa shaashadda samsung markale iyo markale 🙁 Horay ayaan ugu cusbooneysiiyay odin waxna qofna kuma dhaco ??? Mahadsanid
Ku jawaab carlamp
oscar jara dijo
Habeen wanaagsan, hal mar geeri, adeegga farsamada ma hagaajin karaa? waa maxay g-tap ama wax la mid ah ???
Jawaab oscar jara
My S3 sifiican ayuu iigu shaqeeyey ilaa bishii Febraayo markii aan rakibay cusbooneysiinta Kies shaashaduna ay sii xirnaato laakiin waxay sii socotaa gariirka ama dhawaaqa markaan dalab digniin ah ka helo iyo xitaa laydhka laydhka leh digniintu wuu sii socdaa Kadib xoogaa kadib si lama filaan ah ayey daaran tahay .. Waan soo dagsaday barnaamijkaas oo oranaya «Haa. Khatar ku sii jir ”
Su’aashaydu waxay tahay, haddii aan u geeyo SAT, miyay ku beddelanayaan moobilkeyga mid kale? Miyaad u beddeleysaa jibbaaradaas mid kale oo aan khatar ahayn? ama maxay qabtaan? intee ayayse qaadataa? shirkadaydu waa movistar, maheli kartaa midkale inta ??
Ilaa uu terminalku kaa xumaado ma geyn kartid SAT, markaad sameysidna, way dayactirayaan, waligoodna mid kale ugama beddeli doonaan.
7-kii Maajo, 2013 16:46 pm, Disqus wuxuu qoray:
ahh waan hilmaamay waxaan haystaa s3 G TI 9300
Ku jawaab vera
Waad salaaman tihiin, su aasha ugu horeysa lama soo dirin… .. Waxaan dhibaato ku qabaa dukaankeyga ciyaarta ilaa shalay waa markii aan isku dayo inaan furo arjiga hal mar ayuu xirmayaa, xoogaa ka dib waxaan helaa 2 daaqad iyo shaashadda mid dhaheysa googleplay dukaanku wuu istaagay kii kalena wuxuu dhahay com.google.apps wuxuu joojiyay q aqbal, soo sheeg ama baaji laakiin mararka qaar taleefanka gacanta ayuu iga fariisiyaa, maxaan sameyn karaa? Waxaan waalanayaa Samsung S3 GT-I9300 waa midka aan haysto
Dhibaatadaydu waa inay noqotaa mid aad u badan, dhawr dhibcood oo biyo ah ayaa ku dhacay shaashadda, laakiin badhanka galku sidoo kale wuu qoyay. Telefoonku wuu daarayaa oo si fiican buu u raacayaa dhammaan codsiyada, laakiin shaashadda gebi ahaanba waa la xannibay, waxay umuuqataa xoogaa buunbuunin ah maxaa yeelay way yareyd in biyuhu dhacaan.
ma jiraan wax aan qaban karo ??? waad ku mahadsan tahay waqtigaaga iyo taageeradaada
Ku jawaab liz
Waad salaaman tahay, Samsung S3-kayga wuxuu dhintay dhowr maalmood kahor, ma garanayo sababta laakiin waxay umuuqatay in la cusbooneysiiyo softiweerka markaan aqbalayna, waxba ma dhicin, ka dib waxaan doonayay inaan tirtiro codsi aan shaqeyneyn oo si lama filaan ah ayuu u xirmay hadana waxay daartaa illaa iyo calaamadda Samsung oo ay halkaas ku sii sugnaato, maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Lucia Villamarín
Isla waxbaa igu dhaca aniga, mana garanayo waxaan sameeyo, fadlan ma jiraa qof og waxa laga qaban karo kiiskan?
Eliuth Cruz dijo
Dhibaatadaadu waa leben (leben = leben), u raadi macluumaad qaabkan, haddii ay tahay leben jilicsan adigu waad ku saxi kartaa adigu ODIN, haddii ay tahay leben adag waxaad u baahan doontaa qalab khaas ah, haddii aad ku nooshahay Mexico Magaalada, la xiriir isticmaalaha facebook «jtag mexico»
Jawaab Eliuth Cruz
Waxay igu dhacday aniga: Waxaan haystaa Galaxi S III 4.1.2, oo leh beel Jelly waana la xiray dhammaan madow iyo laydhadhka soo noqda (gadaal) iyo ikhtiyaarrada waa la daaray oo waxba ma qabanayso waxayna ku jirtaa 97% batari. iibsadeen 24 maalmood ka hor.
Ku jawaab mªAngeles
U gee adeegga farsamada oo dayactir tan iyo markii aan u maleynayo inay ku jirto damaanad.
Markay ahayd 13/05/2013 00:44 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waxaan haystaa dhibaato Waxaan haystaa s3 Shiine ah laakiin way daartaa laakiin shaashadda way madhan tahay laakiin wicitaanada ayaa imanaya wax walbana waxay noqon karaan Mr. Francisco Ruiz
Ka jawaab genesis
SAAXIIBKA FRANCISCO SUBAX WANAAGSAN, CODSIGAYGA SG AYUU YIRAA Maya Chip Ammaan., Nooca 1.4.4. Su’aashu waxay tahay samgsunkaygu ma leeyahay wax dhibaato ah oo dhimasho lama filaan ah, mahadsanidiin kahor
Aniga ahaan, Samsung Galaxy S3 wuu damiyay dibna uma daarin, waxaan geeyay bakhaarka movistar oo ay masuulka ka ahaayeen u dirida xarunta Samsung SMS, 30 maalmood kadib ayay soo celiyeen waxayna tilmaameen: Terminal lama soo celin karo huuriga isku xiraha dambixiye Aniga oo aan ku qanacsaneyn, waxaan u geeyay seddex farsamo yaqaanno kala duwan ah, dhammaantood waxay isku raaceen wax isku mid ah. Terminalku wuxuu lahaa processor la gubay kuleyl gudaha ah awgeed, waxaan u diray dalab Samsung waxayna igu jawaabeen isla isla. Dammaanadku ma daboolayo waxyeellada biyaha, waxaan dalab ka geeyay xafiiska macaamiisha oo seddex bilood ka dib Sansung ayaa ku jawaabtay iyadoo ku adkeyneysa mar kale isla wax, layaabkeygu waa la weydaarsaday markii lagu lifaaqay warbixinta aan helay waxaa ku lifaaqan sawir ka mid ah taleefan tilmaamaya halka waxyeeladu ka jirto, ogowna in sawirka uusan gabi ahaanba la soconaynin xariirkeyga.
Waan sii wadi doonaa sheegashada iyadoo loo marayo habab kale si loo helo waxa dhaca.
Waan ka xumahay laakiin Samsung ma sii badin doonto.
Runtii wax laga xishoodo qofkii ku dhiiradaa inuu tan difaaco ayaa ah inuu maanku ka lumay.
Salaan iyo nasiib wacan dalabka.
Markay ahayd 17/05/2013 16:30 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Marta Lujan Lione dijo
SALAAN, CAAWIM FADLAN !!!! MY SON kama warqabo waxa uu u ciyaaray ON AAN GALAXY PHONE GACANTA IYO, I CAN MA CALL AMA READ MSS, uu i weydiiyo EE user iyo password IYO Waxaan HA OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo IT XUSUUSNOW ... !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
Ku jawaab Marta Lujan Lione
haye saaxiib, maalin wanaagsan, s3keyga waxaa ku dhacay geeridan lama filaanka ah, waxaa loo isticmaalay in ka yar nus sano, dhibaatadu waxay tahay tan iyo markii aan ku fikiray inaan la joogo qalabkan noloshayda oo dhan, iska tuuro qaansheegta .. ma jirtaa waddo lagu ansaxiyo dammaanadda ??? Waxaan ku hayaa movistar.
Ku jawaab Carl
Waxaan iibsaday s3-keyga usbuuc ka hor «cusub» Laakiin waxaan gartay in laydhka kamaraddu aanu kacsanayn, marka aad sawir ku qaadanayso qol mugdi ah waxba ma arkaysid, oo muuqaalkuna uma fiicna sidii la rabay. batteriga ayaa hoos u dhacaya 50% ama xitaa in ka badan tan marka loo adeegsado codsiyada taleefankayga wuu damiyaa mana sii shito mar dambe, batteriga wuxuu ku haraa 0 waana inaan dhigayaa lacagta kaashka ah (iyadoo lacagtu ay la mid tahay waxa la soo dejinayo) waxay igu yidhaahdeen waa software, ma runbaa?
Iga raali noqo, waxaan hayaa galaxy s3 mini cusub oo la iibsaday, waxay ii sheegtay inay hayso cusbooneysiin software ah oo ay bilawday inay rakibto, waxayna qaadatay qiyaastii 50% laakiin way dhacday oo batteriga ayaa soo baxay taleefanka gacankuna wuu damay. Dib batteriga dib ugu celi oo isku day inaad daarto laakiin hadda ma dhaafayo shaashadda guriga ee samayska iyo moodeelka lagu soo bandhigayo. Maxaan sameeyaa
Jawaab Solokarla ♡
Waa inaad u qaadataa inaad ku dammaanad qaaddo meesha aad ka iibsatay oo aadan dhihin waa aamustay oo u sheeg in lagu cusbooneysiinayo wifi internet-ka ayaa in muddo ah ka socday halkaasna ma uusan daarin
Ku jawaab luis pksz
Waad salaaman tahay, su'aal Mr. Francisco waxaan haystaa labo s3 oo aan daminayo sidaan u leeyahay geerida lama filaanka ah mana isoo celiyaan mar dambe sidaan u sameeyo si aan u soo nooleeyo adiga ayaan kuu dhaafayaa Emaigeyga: eduvaldez90@hotmail.com Waxaan rajeynayaa ka jawaab aad baad u mahadsantahay
Gustavo Arauz G dijo
saaxiib su'aal Waxaan haystaa nooca 4.1.2 iyo i9300ubell1, s3-kayga wali wuxuu ku jiraa halista dhimashada lama filaanka ah qaybtaan? Aad baad u mahadsantahay
Jawaab Gustavo Arauz G
culeys badan dijo
Waad salaaman tahay wanaagsan, waxaan hayaa s3 oo waxaan ogaaday hadda inuu barnaamijku dhaqaaqay, wuxuu ii sheegayaa inaan fashil iyo khatar leeyahay, waxaan haystaa nooca 4.1.2, waxaan ku qaatay dammaanadda ,? Waxaan qabtaa marar badan waxaan dib uga soo ceshay waxkasta warshada sifiican ayayna ufilatay maalmihii uguhoreeyay, kadib markii aan fashilmay, maanta.x tusaale ima qaban, laakiin shalay laba ama seddex jeer dhamaan. Markaan isticmaalayo chrome ... way caawinaysaa
Ku jawaab abrudecai
Waxaan haystaa S3 tan iyo bishii Oktoobar 24, 2012 .. bishii Febraayo 2013 ayaan tuuray, shaashadda ayaa jabtay waxaanan geeyay adeegga farsamada ee Movistar .. Waxaan badbaadiyay qiyaastii bil iyo badh ka hor iyo laba toddobaad ka hor, waxaan ogaaday taas mar kasta oo aan u tago inaan sawiradayda ka daawado shaashadda, dib ayey u soo cusboonaatay ..
Waxaan soo degsaday ciyaarta "sims free" oo aan maalin walba ciyaaro, shalay si heer sare ah (u samee baraf), waxaan bilaabay inaan dib u bilaabo ciyaarta, laakiin waxay ahayd kaliya qeyb ka mid ah ciyaarta, oo isla wax walbana marwalba way dhacayeen , ilaa intaa kadib ay ciyaartu bilaabantay inay burburto. Ma aqaano in tani ay xiriir la leedahay dhibaatada salka ku haysa iyo waxa aan ka walwalsanahay, taleefankayga oo aan la daari karin mana garanayo sababta ay taasi u dhacdo ..
Xalay waxaan kala soo dagay dhowr codsi dukaamada Chile iyo waxyaabo kale oo faa'iido badan leh.
Maanta subaxdii markii aan soo toosay waxaan ogaaday in la fasaxay oo sidii caadada ii ahaydba, waxaan ku xiray si aan lacag u qaato, dhawr saacadood ka dib, waan imid oo waxaan isku dayay inaan daarto ... halkaasna riwaayaddii ayaa ka bilaabatay !!
Markii aan riixo batoonka korontada, shaashadda madow waxay la muuqataa calaamadda samsung s3, kadib waxay aadeysaa shaashadda movistar, waxayna dib ugu laabanaysaa shaashadda samsung-ka madow ... sidaasna ay ku noqon karto inta ay iyagu doonayaan.
Waxaan ka saaray batteriga, jibiska iyo xusuusta ... sidan ayaan u haystay 10 daqiiqo si aan u arko bal in dhibaatada la xallin doono, laakiin MAYA!
Waxaan ku xirayaa pc-ga, laakiin maadaama uusan si fiican u shidan, dib ayey u bilaabataa oo keliya, ma aqoonsana ... iyo xilligan, ma garanayo waxaan sameeyo!
Mana doonayo inaan ku sii wado taleefanka adeegga farsamada!
Haddii qof garanayo sida tan loogu xalliyo qaab guriga lagu sameeyo oo lagu kalsoonaan karo, fadlan, waxaan weydiisan lahaa inay iga caawiyaan sidii aan u samayn lahaa ... maadaama taleefankani yahay qaybta kale ee aniga ...
Mahadsanid, waxaan rajeynayaa jawaab deg deg ah oo qancisa.
Ku soo jawaab Rafael Parra Sandoval
My s3 ayaa i calaamadeeya maaddaama jabintaydu khatar tahay.
Waxaan dhaafayaa saldhiggeyga si aan u arko haddii qofna i caawin karo.
nooca baseband: I93000XEMC2
Waad salaaman tihiin galab wanagsan, waxaan haystaa Galaxy SIII oo dhibaatada i haysata waxay tahay in ay sudhan tahay 20-kii daqiiqaba, ma garanayo sababta, waxaan u haystaa qarkaas qatar ah, miyuu dhimanayaa ??? Waa inaan ka saaraa batariga oo aan mar labaad dhigaa iyadoo qalbigaygu afkayga ku yaal si uusan mar kale iigu soo noqon.
Waxaan hayaa s3 oo androi 4.1.2 ka soo dejista arjigaas waxayna ii sheegtay inaan lahayn wax cidhiidhi ah secure
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, 1 todobaad ka hor taleefankayga gacanta ayaa xirnaa sidaa darteed ma aanan awoodin inaan damiyo waxaana qasab noqotay inaan ka saaro batteriga si markaas ay u daarto mar labaad, waxaan sameeyay ilaa 3 jeer iyo mar 3-aad dhamaan barnaamijyadeyda, xusuusta taleefanka, waxay ahaayeen waa la tirtiray, intaas kadib waxaan dib u bilaabay wersheda sida dhowr farsamo yaqaan ay ii sheegeen, ka dib sifiican ayey u shaqeysay 2 maalmood ka dib wey iska baxday oo kaliya soo bandhigida ayaa soo muuqaneysa marka aad daarto taleefanka gacanta ee oranaya SAMSUNG S3 MY MODEL IS SGH-T999
WAANA KA MICROCHIP AYAAN IDIIN AHAY IN AAD ARAGTID HADDII AAD XAL KASTA HAYSATO MA HAYO CAYMIS MAXAA SABAB AH IN AAN SI KALA DUWAN U IIBSANAYO OO AAN RABO IN AAD SOO CELIYO SIDII AAN UGA HORTAGI KARO DHIMASHO DEG DEG AH WAAYO WAAN KA FIKRAY IN AAN GOOYAASHO GOOBO , Waxaan RAjeynayaa inaad Jawabi Doonto!
MA AQOONSAN YAHAY SAMSUNG BRAND NADIIFADAAS OO AAD SI XUN U SOCDA
Waa salaaman tahay Francisco, waxaan haystaa s3-ka 4.1.2 iyo 15 maalmood ka hor waxaan ku dhacay geeri lama filaan ah, ma jirtaa wax xal ah ama si fudud ayaan u dhintey ... Waxaan haystaa dammaanad la'aan.
Sidee ku saabsan taleefankayga ku bilaabay qaladkiisa, wuu dansan yahay waana inaan ka saaraa batteriga si aan mar kale u daarto, hoos u dhig eMMC oo nooca ayaa leh v1.4.4, laakiin markaan hubiyo aaladda waxay umuuqataa nooca 4.1.2 halis ma ku jirtaa mise maahan? tan iyo markii laba nooc oo kaladuwan ay muuqdaan ...
Waad ku mahadsantahay horay
Jawaab Jose Perez
Amy Isabel dijo
Waad salaaman tahay! ka dib markaan waxbadan ka akhriyey internetka oo ku saabsan dhimashada lama filaanka ah ee Galaxy S3 waxaan fahamsanahay in laga yaabo inaan ka hortagi lahaa. Waxaan hayaa tan iyo bishii Julaay 2012 dhawaanahan waxaan jaray wicitaanadayda, waxaan u qaatay taleefanka si loo hubiyo wax dhib ahna ma aysan helin. Kadib waxaan laqabsaday xaqiiqda ah in wicitaanadayda aysan sidaa usii dheereyn karin maxaa yeelay waan jaray. Khalad kale oo aan ogaaday ayaa ah inay i weydiin doonto marwalba si aan u cusbooneysiiyo softiweerka oo aan u aqbalo, laakiin markaa waxay calaamadeyn doontaa FIRMWARE ERROR, iyo inaan ku tijaabiyo KIES, taas oo aanan dan ka lahayn maxaa yeelay uma maleynin inay tahay wax muhiim ah.
3 maalmood kahor waxaan ku haystay boorsada anigoon dhicin ama aan qoyan ama waxna, way iska baxday. Hadda sideen ku ogaan karaa haddii nuqulkeyga la abuuray taariikhahaas iyo inuu cilladaysan yahay? sida iska cad anigu ma rakibi karo wax barnaamij ah maxaa yeelay ma shidi doono markaa, ma waxaa jira bog ama hab lagu helo macluumaadkeyga kumbuyuutarka?
FADLAN CAAWIMAAD, Waxaan rabaa in aan helo macluumaadkaas xarunta XARUNTA SAMSUNG, marka ma ii sheegi doonaan in aan is dabaray. Mahadsanid!
Jawaab Amy Isabel
Carl Carlson dijo
My sgs3 horey ayaa looxakameeyay waxa kaliya ee aan kuhelayo suura gal madaama aanan damaanad laheyn waa badalida kaarka caqliga, tani waxeey saameyn kuyeelaneysaa wax IMEI-ga ah ama wax lamid ah ???? mise si caadi ah buu u shaqeyn doonaa ????
Ku jawaab Carl Carlson
Waad salaaman tahay, Samsung S3 GT-I9300 Samsung ma haysto luuqada Isbaanishka, waxaan u geeyay farsamo yaqaan si aan u arko inuu badalayo luuqada iyo inkale, wuxuu ii sheegay inuusan awoodin maxaa yeelay nidaamka kama tagayo, qalad ayuu ku dhacaa sida muuqata waxay isaga dhigeen Cusbooneysiin aan isaga ka imaan, taleefankayga gacanta ayaa leh Android 4.2.2 mana u oggolaanayo inay ka soo baxdo, maxaan sameyn karaa si aan u xalliyo kiiskan ????
HELLO! I .. Dhib ayaan kala kulmay dukaankeyga ciyaarta dhowr maalmood. Markaan isku dayo inaan furo arjiga PLAY STORE mar qudha ayuu xidhayaa, xoogaa kadib waxaan helay 2 daaqad shaashadda, mid odhanaya dukaanka googleplay ayaa istaagay kan kalena wuxuu dhahay com.google.apps wuu istaagay.
maxay tani noqon kartaa maxaan sameeyaa? I CAAWI!
Waan xalliyaa dhibaatadan, waan caawiyaa ...
Waxaan hada soo degsaday oo aan rakibay ROM 4.2.2] Slim Bean-d2 taleefankayga, waxaan sameeyay tirtiraha kala ah, "Wipe reset factory factory", "Wipe cache partition", "Wipe dalvik cache" ka dibna sd ku rakib cusub rom
Waxaan bilaabaa hawsha rakibaadda, waxay ku dhammaataa riwaayad la'aan, waxay ku soo noqotaa menu-ka 'cwm' oo dib ayaan u bilaabay laakiin dib uma bilaabin taleefanka mar kale
Iima siinayso inaan ku soo jeesto habka soo kabashada, ama la soo bixida iyo dib u dhigida batteriga, waxba, tanina waxay horey u jirtay saacad ka dib rakibaadda. Batariga ayaa buuxa, markaa taasi maahan sababta.
Taasi waa inaan sameeyaa?
Waad salaaman tahay, waan ka xumahay, waxaan hayaa Galaxy SIII, waa markii saddexaad ee shaashadda madow ee leh astaanta samgsung ay si lama filaan ah u rogto oo ay halkaa uga dhaqaaqdo, iyadoo nalka buluugga ah shidan yahay, ka hor intaanan dhicin, waxaan geeyay bartamaha fiiro gaar ah iyo aniga aniga Waxay dib u bilaabeen, iyagoo ii sheegaya inaan suurtagal tahay inaan soo degsaday codsi fayras leh, laakiin waxay ila tahay wax aad iila yaab leh in kani uu yahay markii saddexaad ee igu dhaca aniga oo waxa aan ka soo dejinayaa ay ka socdaan dukaanka ciyaarta, maxaan sameeyaa Waan sameeyaa ??? ama maxaan sameyn karaa si aysan markale u dhicin ???
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa s2 oo khatar ah muddo 2 sano ah, ayuu ii sheegayaa, qatarta qatarta ku jirta iyo wax kasta oo kale oo fiican ayay socdaan, waa halyeeyo reer magaal ah. salaan
Waad salaaman tihiin. Waxaan haystay s3 muddo 7 bilood ah laga bilaabo bishii shanaadna waxay bilaabatay inay barafoobaan. Hadda waa wax aan loo dulqaadan karin maxaa yeelay wuxuu sameeyaa nus saac kasta. Soo dejiso barnaamijka oo waxay leedahay waxaad leedahay jajab cilladaysan. Waxaan haystaa 4.1.2 waana sameeyaa oo maalin waliba way ka sii liidataa .. sidee tahay haddaba haddii tan oo kale aysan hore u dhicin?
Iskuday inaad dhalaalaysid xoogaa rom ah oo la kariyey ah si aad u aragto inay si fiican adiga kuu shaqeynayaan.
hello waxaan ku rakibey Samsung galaxy s3 odin movile pro oo leh romka rasmiga ah
Samsung oo hadda odinku ma joojinayo dib-u-bilaabista mar labaad iyo mar labaad mana garanayo
Daar taleefanka gacanta fadlan caawi ka hor inta aanan miyuhu rakibmin oo ay shidan tahay dowlan laakiin USB-ga mobilka ayaa jaban, sidee baan ugu xallin karaa kaarka sim micro, mahadsanid hore
Ku jawaab goge nm
My samsung galaxy s3 wuxuu joojiyay shaqadii geeridii kadiska ahayd ee xalay dhacday awgeed, waxaan xisaabinayaa inuu harsan yahay 30% baytariga, wixii markaas ka dambeeyayna wuu damiyay, wuu joojiyay shaqadiisii ​​mana bixinaayo mana shidin. xal kasta ?? Mahadsanid!
My samsung s3 maanta wuu dhintey mana garanayo waxa la sameeyo madaama aan iibsaday kaliya bil ka hor dabcanna la isticmaalay laakiin waxaan ahaa 1 jir maantana subaxnimadii ayaa waxaa i soo wacay ehelkeyga galabtiina maya ka dheer BOLIVIA waxaanan jeclaan lahaa inaan helo xal degdeg ah = /
Tag adeegga farsamada ee kuugu dhow, sida kan
waxaa qoray Pablo Suils (CIT), wey ii shaqeysay aniga !!
Ku jawaab tomasXL
fadlan ka jawaab wajigeyga raadi aniga oo ah Luis Gustavo Torres Zamorano Waxaan ka tagayaa muraayadaha indhaha
Dabcan, daqiiqad kadib waan ku raadin doonnaa adiga oo macluumaadka kuugu soo diri doona facebook-gaaga, si aan cidna lacag noo siin si aan u caawinno
Jawaab Alighieri Ramírez De Pester
hello 3 maalmood ka hor samsungkeygii waa la cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeya sidoo kale waa buluug, ma iibsan doono samsung badan
Haye, waxaan hayaa taleefanka gacanta ee Shiinaha, ka dibna wuu damiyaa oo waa shidaa waxbana kama heli karo maxaa yeelay taas ayaa ku dhacda isaga.
Ku jawaab jerry
My Samsung S3 ayaa dib loo bilaabay waxaanan soo degsaday "emmc" waxayna ii sheegaysaa in jabkaygu aanu khatar ahayn .. maxaan sameeyaa ???
Ku jawaab Giuliana
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa la sameeyo marka taleefanka gacantu mar hore dhinto….
Qof kastaa wuxuu yiraahdaa waa inaan cusbooneysiinaa si aan uga fogaanno ... Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay laakiin maxaa xal u ah kuwa naga mid ah ee hadda soo ogaadey iyo taleefanka gacanta ee hadda dhintey ...
Runtii ma rumaysan karo in sansung ay sidan oo kale noo hoos dhigto… ..
waa maxay niyad jab….
Waxaan dhigay softiweer soo degsasho ah waana tirtiray anigoo ka saaray batteriga hada wuu shidan yahay oo wuu daminayaa ilaa iyo inta sansaanka calaamadda uu daminayo markaasna ma isticmaali karo, sideen mar kale u isticmaali karaa? fadlan ii sheeg talaabooyinka
Jawaab Lah Miiluh Ldz
Haddii aad geli karto qaabka soo dejinta waxaad soo dejisan kartaa qalab Samsung ah oo asal ah adoo ku dhajinaya Odin
Markay ahayd 29/11/2013 16:02 PM, «Disqus» ayaa qoray:
xagee ka soo dagsadaa? Dhammaan waxyaabaha ku jira taleefanka waa la tirtiray waxaan rabaa inaan ogaado sababta taleefanka gacanta uusan ugu isticmaali karin waxna ma aqaan meel aan ka soo dejisto barnaamijyadaas
Markay ahayd 29/11/2013 16:11 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Miyaan lumin doonaa waxyaabaha aan ku haysto taleefanka?
Waxay u badan tahay haddii aad weydo maadaama ay tahay inaad calaamadeyso dib-u-soocid ka soo wareegista odin si aad isugu daydo inaad soo kabsato nidaamka.
Saaxiib nasiib badan !!
Miyaan waayi doonaa wax walba oo taleefanka ku saabsan markaan rabo inaan hagaajiyo sansung galaxy s3 mini? Sideen ku joojiyaa ama ku waayi karaa?
Waxaan haystaa samsung galaxy s3, markaan shido way gariirtaa oo badhamada hoose way daaraan lakiin sawir ima siinayo, wicitaanada ayaa soo gala wax walbana wax sawir ah ima siinayaan, waan damiyaa waana shid oo sawir ima siinayo…. kiiskan maxaan sameyn karaa ???
Ku jawaab Talina
Wax la mid ah ayaa aniga igu dhaca aniguna waxaan u diray dib u eegis waxayna igu yiraahdeen waa shaashad laakiin uma maleynayo inay tahay sababtoo ah waxay bilaabatay inay fashilanto markii aan cusbooneysiiyey nooca ugu dambeeya.
Ku jawaab luisangel
Jawaab ku Marti
Waan ku faraxsanahay waxay noqon doontaa in galaxy s3 uu iga caawin karo inuu dansan yahay oo uusan sii shidanaynba. Waxaan qaatay dhowr farsamoyaqaano waxayna ii sheegeen inaysan garanayn waxa ay iga caawin karaan xfa.
Ku jawaab yinaldy
Waad salaaman tihiin, sidee buu galaalkayga s3 u daganyahay, si lama filaan ah ayuu u damay, daqiiqado kadib ayaan batari ka helay galaxy s4 markii aan isku dayay inaan ku dhejiyona wuu daarmay unuguna mudo dheer ayuu sii jiray waxyar kadib wax lamid ah ayuu sameeyay mar labaad waxaan isku dayay inaan ka saaro batariga wayna shidan tahay maalintii oo dhanna dhib la’aan ayay ku sii jirtay laakiin tan iyo shalay galkayga s3 mar kale markii aan ku jiray, wuu damay ilaa iyo hada ma awoodin inaan shido, Maxaa samayn karaa?
Ku jawaab aldrin
Christopher Galo dijo
Hagaag sidoo kale waxaan haystaa dhibaatada, mar hore ayaan rakibay cusbooneysiintii ugu dambeysay waxaanan heystaa nooca Jelly Bean 4.3, laakiin muddooyinkan dambe shaashadda waa la qaboojiyay oo markale ayay shaqeysaa daqiiqado kadib waxayna noqoneysaa mid soo noqnoqota mar kasta ... dhibaatadan ka hor inta aan la cusbooneysiin
Ku jawaab Cristopher Galo
waa su'aal, laakiin taleefanku ma daarmayo sidee baan u yeeli karaa ... waxaan ku ahay baradho tan ku jirta
Ku jawaab camen
Waa salaaman tahay, fiiri waxaan qabaa dhibaato aad u daran oo aan u leeyahay galaxy s3 ma aanan u cusboonaysiin noocii ugu dambeeyay ee aan uga soo tagay sidii ay ahaan jirtay iyo dhibaatada i haysata ayaa ah in ay hadda dib u bilaabmayso oo kaliya markii la geliyo samsung logo mar kale ayey dib u bilaabaneysaa dhibaataduna waxay tahay Iima ogola in aan galo qaabka soo dejinta ama wax la mid ah oo ay isku dayeyso in ay sameyso oo sida aad u aragto shaashadda soo kabashada dib ayey u bilaabaneysaa mana ii oggolaaneyso inaan doorto. Fadlan i caawi aniga aad baan u quussanahay waanan ku qanacsanahay
Hagaag, waxaan haystaa galaxi s3 maantana sifiican ayey u shaqeyneysay si lama filaan ah shaashaddii ayaa madoobaatay waxbana ma qaban karo waxaan u maleynayaa inuu la kulmay geeridii lama filaanka ahayd ee aria arinkaa mana ka baqayo lix bilood isaga iyo aniga waxaan ka soo iibsaday Mareykanka waxaanan ka imid Venezuela waxaan u baahanahay caawimaad fadlan.
Waa hagaag waxay kuu adeegaysaa haddii ay tahay qiyaastii 6 bilood jir oo buluug ah oo waa weyn ee s3 macquul tahay waa geerida aad sheegayso, laakiin haddii aad taqaanid farsamo yaqaan wanaagsan wuxuu ogyahay qaybaha ku jira taleefannada gacanta waxaa suuragal ah inuu qaybta xun ku beddelo midka wanaagsan mid, hubka ka fur unugga kaligiis oo si fiican u fiiri halka uu heerka culeysku ka kaco waxaa jira laba qaybood oo madow oo laba jibbaaran, midkoodna waa midka xun, haddii aad aragto heerka xamuulka oo foorara, midka tooska ah
Jawaab si loo tiriyo
Waad salaaman tahay, waxaan dhibaato ku qabaa SIII-kayga kadib markii cusbooneysiintii ugu dambeysay taleefanka uu yahay mid gaabis ah, haa waxaan ku jiraa shaashadda weyn waxaanan riixayaa hawl kasta, sug waqti dheer si aan u furo midkood codsi laga soo dejiyay dukaanka ciyaarta ama mid nidaamka, ama si fudud si aad u wacdo ama u dirto fariin. Mahadsanid, waxaan sugayaa jawaabtaada degdega ah.
Waxaan horey u rakibey emmc mana awoodo hadii taleefankeygu qatar ku jiro maxaa yeelay ma arki karo shaashadda
hello guys maalmo yar ka hor taleefankayga samsung s3 mini goldenub model wuxuu ku bilaabmay reboots ka batariguna wuu soo baxayaa iyadoo barnaamijka uu ii sheegayo khaladaadka lebenka maya, chip aamin ah iyo markasta oo ay dib u bilaabaneyso barnaamij kasta iwm.
Waxaan rajeynayaa in qof i caawiyo
salaan ka timid san fernando secta region chile
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Samsung Galaxy SIII Mini 8 bilood ka hor, si fiican ayey u shaqeysay ilaa uu batterigiisu sii yaraado wax ka yar, waxaan iibsaday batteri cusub waxayna ku sii socotaa isla dhibaatada, waxaan dib u habeeyay taleefanka gacanta oo aan dib ugu soo celiyey gobolka warshaddii waana wali isku mid ah, waxay socotaa illaa toban daqiiqo waxayna ku dhacdaa shaashadda madow iyo astaanta ay ku qoran tahay samsung Galaxy SIII Mini. Haddii taleefanku ku dhejisan yahay xeedho wuxuu u shaqeeyaa si qumman ... Ma jiraa qof i caawin kara?
Ku jawaab cawl
Antonio avendano dijo
Waxaan haystaa galaxy s3 mini GT-l8190L markaan markaan bikradiyeerka rakibo v11 khalad ayaan sameeyay markii aan joojinayay "N" halkii aan ka dhigi lahaa "L" oo markii aan ka boodayna ma aysan wada shidnayn, waxay gaadhay calaamadda samsung iyo wuu damay oo sidaasuu kusii jiray waana damiyaa kaliya ilaa aan ka baxo batteriga. xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in aysan soo galin habka soo kabashada laakiin ay gasho qaabka soo degsashada caawimaad deg deg ah fadlan.
Ku jawaab antonio avendaño
Waad salaaman tihiin, dhibaato ayaan ku qabaa midabkayga buluugga ah ee Samsung SIII, midka weyn ayaa hada soo dagsaday x plat sheekada farrinta fariimaha waana ogahay inaan soo dajiyay, waxaan u dhigay si aan ugu rakibo markiiba. shid oo kaliya waxay kujirtaa astaanta samsung way shidan tahay wayna damineysaa tngo q saar batteriga pa.q sii dami oo daaran waxay noqoneysaa in ay tahay geeri lama filaan ah ama u baahantahay ficil ka imanaya solerka iga caawi xfa mahadsanid
Ku jawaab leurismar
Subax wanaagsan waxaan heystaa galaxi 4 waxaanan ku tala galey in ay soo dejistaan ​​flax sida ama meesha ay igu sameyn karaan, waa Mareykan, waa qolkeyga shirkada Verizon
Waad salaaman tihiin asxaabta. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa uu yahay taxanaha 'chip' ee ay saamaysay. Taariikhda waxsoosaarka iyo xog kale haddii cid ogtahay
Qiyaasta. Tani xal maahan, ee waxay ka hortag u tahay kuwa aan weli u dhiman taleefanka. Haddii aad horey u dhimatay (sinaba looma rogi karo, waxaad moodaa inaadan waxba qaban karin. Sidaa darteed, waa in aan loogu yeerin sida loo xaliyo dhibaatada dhimashada lama filaanka ah laakiin sida looga fogaado.
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday S3 isla markii ay soo baxday 2012 waxayna i siisay geeri lama filaan ah Sabtidii, Juun 7, 2014. Waxaa ii haray 4 bilood ka hor intaanan hayn 2 sano. Taasi ma leedahay wax dayactir ah oo miyay qaali noqon doontaa?
hello hello. qolkeygu waa weyn S3. maalintii sabtida ahayd july 12 nalkii adeega ayaa biloowday oo wuu damay waan daaray oo kaliya astaanta samsung iyo astaanta movi ayaa soo muuqanaysa iyo wixii la mid ah. suaashaydu waa…. Tani waa geeri lama filaan ah oo waxay leedahay dayactir. Ii sheeg maxaan sameyn karaa iyo haddii Samsung wali la isku halleyn karo.
Ku jawaab yannet
Waad salaaman tihiin, waan ka xumahay waxaan haystaa galaxy siii gt9300 iyo dhibaatada marka aan dhigo guntinta oo aan dhigo qori kale iyo in ka yar maalin jabkii ku dhaca galaxyada uu u muuqdo inuu xiran yahay ... fadlan waxaan rabaa taageero nooc dhibaato ah
Waad salaaman tihiin, waxan hayaa s3 been abuur ah oo sifiican ayuu u shaqeeyaa, marka laga reebo markaan makarafoonka dul dhigo aniga oo aan istaagin, wuu istaagayaa oo dib ayuu u bilaabayaa, tani waxay leedahay dawo, inkasta oo aan ogahay inaysan asal ahayn, waxay isticmaashaa androy Nidaamka 4.1.1 oo wuxuu leeyahay markaan raadinayo cusbooneysiin, taleefankaaga horay ayaa loo cusbooneysiiyay mahadsanid
Ku jawaab kenneth
DUKAANKAYGA SAMSUNG GALAXY mini2 MA KU SAMEYSAA BUQA XADGUDUB? MAYA. SHAQO SIR AH INTAN WAA MAHAD LEH MAHADSANID
Ku jawaab CORONADO
Waxaan hayaa s3 mini ilaa shalayna ma shubanayso, waxaan haystaa android 4.1.2, ka hor intaanan haysan Samsung GT-S 5510 oo isla wixii igu dhacay igu dhacay, kumuu shuban oo waxaan ku dhammeeyay badalkiisa; Wax kale ma qaban karo? mar hore dhintay?
Saaxiibbaday my sansun s3 markii aan ag maro bogga k ma laha caymis sidaas ayey ku sii jirtaa mana wici karo ama ma heli karo wicitaanno waa inaan dib u bilaabaa si aan u helo ama u wici karaa wax kasta oo kale inay shaqeeyaan haddii qof garanayo sida loo hagaajiyo fadlan caawi aniga Mahadsanid
Rocìo Silva dijo
Sida S3-kayga la damiyey iminkana markaan daarmayo maxaa yeelay way shidan tahay, shaashadda ma daarna waxay sii joogaysaa madow.
Waxaan ku xiray qaab markii aan doonayay inaan kaydiyo macluumaadka, waan kari waayey maxaa yeelay waxay i weydiisatay inaan furo, taasna macquul maahan maxaa yeelay shaashadda gebi ahaanba waa madow… qof igu hagaya wixii aan sameyn lahaa?
Jawaab ku sii Rocìo Silva
Raul Cano Diaz dijo
Waad salaaman tihiin moobilkeyga oo bil nolosheyda shaashaddu wey madoweyd waxaana u qaatey inaan dayactiro maxaase layaab igu ah in dayactirka igu kacayo 150 euro oo aan diidayo inaan bixiyo tan iyo markii qaansheegtu sheegtey inay bedeleen qaybo cillad leh feker ahaanteyda Taasi waa , haddii ay tahay inaan galo dammaanad qaad iyo sida ay iyaga yihiin, maxaan sameyn karaa maxaa yeelay waxaan horay u sameeyay 5 sheegasho dhammaantoodna waa la diiday
Jawaab Raul Cano Diaz
Waxaan shidaa taleefanka shaashaduna way madhan tahay. Wax damaanad ah ma haysto. Maxaan sameyn karaa?
Waxaan shidaa taleefanka shaashaduna way madhan tahay. Wax damaanad ah ma haysto. Maxaan sameyn karaa ????
My s3 wuu xirnaa buluuguna waa la waday markaan doonayay inaan furo, ismana ogolaanin sidaas ayaan batariga uga saaray waxaanan doonayay inaan markale shido oo kaliya waxaan helay sawirka s3 iyo qaabka markii aan daaray damiyey oo sameeyey batoonka saxaafadda. mugga ayaa soo baxaya xog qaarna ma rakibi kari waayey wax kasta oo su'aashaydu tahay haddii ay leedahay sabuurad caqli gal ah? Waxaan sugayaa faallooyinkaaga
Ku jawaab miriam
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan ka imid dalka Venezuela, waxaan hayaa taleefan yar oo yar yar oo loo yaqaan 'Galaxy S3 galaxy' maantana wuu dansaday mana jirto wado lagu daarto, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab gilmaire
Hagaag habeenkii saaxiib waxa dhaca waxa weeye taleefankayga gacanta oo dansan waxaan horeyba u qaatay dhowr meelood waxayna ii sheegaysaa inaysan lahayn nooc qabanqaabin ah, xilligan la joogo markuu damco markaan soo laabto oo aan waxba soo bandhigin. , kaliya shaashadda cad ayaa kaa caawin kartaa Waxaan u baahanahay macluumaadka mahadsanid =) Sideen kula soo xiriiraa meel kasta ???
samsung s4 ayaan kusii nagaadaa astaanta samsung maxaan sameyn karaa
Ku jawaab arias
Saaxiib, mar kasta oo aan qashinka nadiifiyo, taleefankaygu dib buu u soo kiciyey. Maxay tan u dhacdaa? Waad ku mahadsantahay horay
Waxaan haystaa samsung galaxys3 astaan ​​isteerinka isteerinka ayaa soo muuqatay ka dibna waa laga saaray sida tan waxay ahayd 2 daqiiqo ... ka dib waxaan isku dayay inaan ka saaro iyada oo aan guuleysan ka dibna waan damiyay oo wuu damiyay ilaa 5 ilbidhiqsi ... intaas ka dib waxaan shiday taleefankayga laakiin shaashadda ayaa madow oo leh menu bidix ee kore ee taleefanka gacanta iyo calaamadda android-ka oo hoosteedana waxay ku qoran tahay raritaan sidaasna waxay ahayd 15 daqiiqo illaa moobiilku uu ka dhammaaday baytarigiisa oo hadda in aan rabo inaan ku dalaco… wax lacag ah kama qaado oo waxbadan oo kayarna way daartaa… maxay noqon kartaa ?? Sideedse ku xalisay ...
Hellooo Waxaan hayaa samsung galaxy s4 mini oo la soo iibsaday bishii Meey 2015 oo si lama filaan ah ayaa loo xidhay. Maaha inay maamusho inay shiddo, xitaa awood + mug kor u qaad. Maxaan sameyn karaa?
Waxaan haystaa s2, ma ahan 3, shaashadda ayaa qabowday, ma dhaqaaqayso ama waqtiga, ma jirto wax dhaqaaqa, macquul maaha in la soo dejisto codsi kasta, sidee baan u sameeyaa?
Ku jawaab vere
JACKSSON PEREIRA dijo
SALAAM WANAAGSAN GOOBTA WANAAGSAN KA QAADO SALAANTA ISTICMAALKA EE VENEZUELA, WAXAAN LEEYAHAY SAMSUNG S4 MINI GT-I9195 OO 5 MAALMOOD KA DANBAYSAN OO AAN LAGA BAXAYN INTA KASTA OO AAN KU XIDHAHAY PC KII AQOONSADAN LAHAYN MA SAMEEYO WAXA AY KU LEEYIHIIN WAKHTIGA SERA Q WAA I CAAWIN KARAA MAXAY XALKU NOQON LAHAA
Jawaab JACKSSON PEREIRA
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa taleefanka gacanta oo geeri lama filaan ah ku badbaaday muddo dheer. Ma aysan awoodin inay daaraan. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo cesho sawirada iyo fiidiyowyadu waxay leeyihiin qiime badan oo shucuur leh. Waa la samayn karaa?
Wilber Perez M. dijo
samsung gt-i8190l kama shidna wuu gariirinayaa markaan isku xidho xeedho laakiin kaliya biriqda ayaa birbirqaysa Q ma caawin karaa Fadlan?
Jawaab Wilber Perez M.
Buenas daahitaan. Maanta S3 mini-ga ayaa hadhay isagoo sudhan intaan lacag ku dalacayo. Waan furey oo waan danshey si aan dib ugu bilaabo mar dambena ma daarin. Waxaan ku xiraa lacagta batteriga mana ka tarjumeyso ama inay shaashada ku shubaneyso. Wuxuu u egyahay qof dhintay ... ma iga caawin kartaa baaritaanka cudurka?
Angel Ernesto Hache dijo
hello galab wanaagsan, waxaan hayaa saMSUNG S3 OO DEG DEG AH MA RABTID IN AY II SOO ​​JOOJISO OO AAN RABIN IN AAY IGU ISKU BADASHO INTII AAN HELI KARO HALKA. MAXAAN SAMEEYAA SI AAN U XALIYO DHIBAATAN AAN HAYAY?
Jawaab Angel Ernesto Hache
hello waxaan hayaa Samsung SGH-T399 iyo maalmo ka hor markii aan daaray waxay ku kacaysaa oo kaliya meesha ay dhigeyso asal cad oo leh astaanta T-Mobile. Waxaan u maleynayaa inay tahay inuu ahaado nidaamka qalliinka laakiin waxaan jeclaan lahaa fikrad kale oo ku saabsan sababaha keena guuldarada mobiilkeyga
Ku jawaab Daymel
Waxaan hayaa samsung s3 weyn ciladuna waxay tahay markuu batterigu gaaro 66% shaashadda ayaa biloowda oo damisa mana sii shito mar dambe .Betteriguna waa cusub yahay hadana wuxuu marayaa 0%. Kani muxuu noqon doonaa?
Taleefankayga Sansung mini s III si lama filaan ah ayuu u joojiyay shaqadiisii, mana daarin, wuxuu u dhigay sidii inuu shidan doono oo uu ku celcelinayo isla habab badan marar badan oo uusan bilaabi karin, marka laga saaro batteriga wuxuu joojiyaa howshaas mana sameeyo daaran mar dambe, waxa Fadlan ii soo jeedi inaan u baahanahay caawimaad, halkan waddankayga oo aan taleefan ka iibsado waxay la mid tahay iibsashada ama way ka qaalisan tahay hal ama laba caag ama taayiro baabuur ... Waan go'doonsanahay. Ma i caawin kartaa..Sandra oo ka socota venezuela..Mahadsanid
Waad salaaman tihiin, subax wanaagsan, Samsung S3-kayga waa dansan yahay dibna uma daarin, waxaan u geeyay wiil waxaanan ii sheegay in sida uu qabo processor-ka waxyeeladu soo gaadhay fadlan ii sheeg waxa aan samaynayo.
Ku jawaab daylan ojeda